Cancer Symptoms for Men ယောက်ျား-ကင်ဆာ လက္ခဏာများ – Mawlamyine Daily
Posted on June 1, 2018 by Mawlamyine Daily
မော်လမြိုင်၊ ၂ ဇွန် ၂၀၁၈
No.1 – Breast Mass ရင်သား အကျိတ် စမ်းမိသလား
No.2– Persistent Pain or Discomfort in Any Body Area ကိုယ်ခန္ခာ တနေရာရာမှာ မပြတ်တမ်း နာနေသလား
No 3. – Changes in the Testicles or Scrotum ကျားအစိ၊ ကပ်ပယ်အိတ်မှာ အပြောင်းအလဲ ရှိလာသလား
No.4– Changes in the Lymph Nodes တက်စေ့တွေ ကြီးနေ-ရောင်နေသလား
No.5– High Fever ကိုယ်သိပ်ပူပြီး ဖျားသလား
No.6– Weight Loss Without Trying ကိုယ်အလေးချိန် ကျလာသလား
No.7– Gnawing Abdominal Pain and Depression ဗိုက်နာပြီး စိတ်ဓါတ်ပါ ကျလာသလား
No. 8 – Fatigue (Physical or Mental) စိတ်ရော လူပါ အားကုန်နေသလား
No.9– Persistent Cough ချောင်းဆိုးနေတာ မပျောက်နိုင်ဖြစ်နေသလား
No. 10 – Difficulty Swallowing အစာမျိုချတာ ခက်လာသလား
No. 11 – Changes in the Skin အရေပြား အပြောင်းအလဲတွေ သတိထားပါ
No. 12 – Blood in Sputum, Stool or Urine သလိပ်ထဲ၊ ဆီးထဲ၊ ဝမ်းထဲမှာ သွေးပါလာသလား
No. 13 – Mouth Changes ခံတွင်းမှာ အပြောင်းအလဲတွေ ရှိနေသလား
No. 14 – Urinary Problems ဆီးပြဿနာရှိ ပါသလား
No. 15 – Indigestion အစာမကျေတာ ဖြစ်ပါသလား